Lovelink Apk Download maimaim-poana ho an'ny Android | APKOLL
Lovelink Apk Download maimaim-poana ho an'ny Android
Febroary 24, 2022 Janoary 12, 2022 by Reyan Ahmad
Salama daholo, te-hiditra amin'ny zava-misy virtoaly romantika ve ianao? Raha eny, eto izahay miaraka amin'ity fampiharana Android mahagaga ity, izay fantatra amin'ny anarana hoe Lovelink Apk. Izy io dia fampiharana Android milalao zava-misy virtoaly, izay manolotra endri-tsoratra an-taonany maro miaraka amin'ny tantara samihafa, miaraka amin'izy ireo ianao dia afaka miresaka sy mahafantatra ny tantarany.
Araka ny fantatrao ankehitriny, ny olona dia tia mandany fotoana amin'ny fitaovana Android. Ny rindranasa Android samihafa dia eny an-tsena, izay azonao ampiasaina hialana voly. Fa androany isika dia eto miaraka amin'ny fampiharana Android mahatalanjona, izay ahafahanao miaina toe-javatra tena izy.
Manolotra endri-tsoratra samihafa izy io. Miaraka amin'izy ireo ianao dia afaka miresaka sy mizara hevitra, sary. Azonao atao ny mahalala ny tantaran'izy ireo ary mizaha bebe kokoa momba azy ireo. Manolotra fiasa fanampiny an-taonina izy, izay hozarainay amin'ny antsipirihany miaraka aminareo rehetra.
Noho izany, raha vonona hampiasa an'ity rindranasa ity ianao, dia mamporisika anao hahalala momba an'ity app ity alohan'ny hampiasana azy. Azonao atao ihany koa ny mifandray aminay raha manana olana amin'ny fidirana an'ity fampiharana ity ianao. Azonao atao ny mampiasa ny fizarana fanehoan-kevitra hifandray aminay ary aza misalasala mampiasa azy. Andao ho fantarina ny momba ity app ity.
Topimaso momba ny Lovelink Apk
Izy io dia fampiharana Android, izay novolavolain'ny Ludia Inc. Izy io dia manome karazana sarimiaina samihafa, izay manolotra tantaram-piainana samihafa. Azonao atao ny mahita ny lalao mifanaraka amin'ny mahaliana anao ary manomboka mifandray amin'izy ireo.
Manolotra endri-tsoratra anime hafa maherin'ny 60, miaraka amin'ny tsangantsangana samihafa. Manome anao ny fidirana handefasana zanabola, izay ahafantaran'ny hafa ny momba azy. Azonao atao koa ny manomboka mifampiresaka amin'ireo tarehin-tsoratra ireo. Manome hafatra an-tsoratra auto, misy safidy maromaro.
Mila mifidy ny lahatsoratra mifandraika amin'ny valinteninao fotsiny ianao ary mandefa azy. Azonao atao ny mitazona ny filalaovana andraikitra mandra-pitranga ny zavatra iray. Amin'ny fotoana iray dia azonao atao ny mangataka daty na hanao ilay hafa. Izy io koa dia manome daty virtoaly, izay ahafahanao mahatsapa ny sary amin'ny teny.
The Lalao 2D manome sehatra miolakolaka ihany koa, izay manimba ny daty na ny fiafarana mahafaly. Miankina aminao ny fomba tianao hamarana azy. Misy ihany koa ny fizarana sary toy ny fifandraisana rehetra, saingy tsy maintsy mahazo diamondra ianao mba hanesorana ny fiantraikany manjavozavo. Ny sary dia matetika omena miaraka amin'ny fiantraikany manjavozavo.
Saingy manolotra ny Lovelink Mod Apk izahay, izay manolotra ny endri-javatra karama rehetra voahidy maimaim-poana. Noho izany, afaka mampiasa ny endri-javatra karama rehetra ianao nefa tsy mandany vola na ariary iray. Azonao atao koa ny mandefa fanomezana ho an'ny hafa, izay mampitombo ny fahalianan'ny fifandraisana virtoaly.
Misy endri-javatra mahavariana kokoa taonina ao amin'ity rindranasa ity, izay ho hitanao. Noho izany, ampidino ity rindrambaiko ity ary mahazo maimaim-poana ireo fidiram-bola rehetra. Raha manana olana amin'ny fampiasana an'ity fampiharana ity ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Size 152.39 MB
Anaran'ny fonosana com.ludia.lovelink
SOKAJY Games/Role Playing
Ilaina ny fanampiana kely indrindra 5.1 sy ambony
Ny sasany amin'ireo fiasa dia voalaza ao amin'ny fizarana etsy ambony, fa misy mihoatra noho izay azonao zahana ao amin'ity app ity. Ka zahao izy ireo ary azonao zaraina aminay koa ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany. Izahay dia hizara ny lisitry ny fiasa lehibe aminareo rehetra.
Karakter samy hafa misy tantara samy hafa
Vohay ny endri-javatra rehetra naloa
Sary tsy misy Blur
Multiple misafidy ny Hiresaka
Manintona be ilay interface
Manana fangatahana iray hafa ho anao rehetra koa izahay.
Araka ny fantatrao dia tsy misy amin'ny Google Play Store ny app Mod. Ka hizara rohy aminareo rehetra izahay. Izahay dia mizara ny rohy aorian'ny fitsapana azy amin'ny fitaovana maro, noho izany aza mahatsiaro tena ho voaro amin'ny paompy amin'ny bokotra fampidinana. Raha vao manindry ny bokotra misintona ianao dia hanomboka ho azy ny fisintomana.
Lovelink Apk no fampiharana Android tsara indrindra, hiaina ny zava-misy indrindra amin'ireo realista mivory amin'ny olona vaovao. Misy endri-javatra maro kokoa taonina, izay azonao atao ny mankafy. Noho izany, apetraho ity app ity ary manomboka mifampiresaka. Raha mila fampiharana misimisy kokoa, tsidiho hatrany ny tranokalanay.
Sokajy Games, Role Playing Tags Lalao 2D, Lovelink Apk, App Lovelink, Lovelink Mod Apk Post Fikarohana
Whatsmock Pro Apk Download ho an'ny Android [vaovao 2022]
Animeku.TV Apk Download ho an'ny Android [2022 Update]